Njengomthengisi wezixhobo zokumpompa ekudala umiselwe, inkampani yethu iqinisekisiwe kwizatifikethi zemizi-mveliso ezinje ngezi zilandelayo:
Kwimveliso yezixhobo zokumpompa, inkampani yethu ime ngaphandle koogxa bayo ngezi zizathu zilandelayo:
1. Ixabiso leMveliso esezantsi kunye nexabiso elifanelekileyo
Ifunyanwa kwiziko lemveliso yokuvelisa impompo yaseTshayina, isixeko saseShijiazhuang, inkampani yethu iseke umzi-mveliso oluludaka olulungileyo. Ukusukela ukuba izinto zokumpompa iiyunithi, intsimbi iyalonwabela ixabiso elisezantsi apha, iindleko zethu zemveliso zincitshisiwe kakhulu. Kungenxa yoko le nto sinokunika iimpompo ezinokuthenjwa ngamaxabiso afanelekileyo. Ngaphaya koko, isiseko sethu semveliso yepompo ye-petrochemical ikwindawo yaseDalian kwaye baninzi abasebenzi abanamava nabanobuchule.
2. Ukuthenjwa kunye neMveliso esemgangathweni
Njengomenzi wezixhobo zokumpompa, sihlala sinamathela kumgaqo wetekhnoloji kunye nomgangatho uza kuqala. Zonke iimpompo ziyilelwe kwaye zenziwa ngeendlela zobuchwephesha zamanye amazwe kunye nezixhobo. Kwangelo xesha, sinikezela ngemveliso ebunjiweyo eyilelwe ngokweemfuno zokutshintsha zabathengi bethu. Siyathembisa ukuba yonke impompo esikunika yona inandipha umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Ukuqinisekisa ukuba iiyunithi zethu zokumpompa zikunikeze ngokugqibeleleyo kwiimfuno zakho, simisele inkqubo yenkqubo esemgangathweni engqongqo yolawulo lomgangatho. Singabonelela ngeemveliso eziqinisekisiweyo ngophawu lwe-CE, imigangatho ye-ISO9001 okanye eminye imigangatho yemizi-mveliso. Ngeli xesha, sinokubonelela ngerekhodi yolawulo olusemgangathweni kunye nengxelo enxulumene nayo kuwe ukuba kukho imfuneko, njenge "ngxelo yepropathi ebonakalayo kunye neekhemikhali yezixhobo zeendawo eziphambili zempompo", "ingxelo yokulinganisa yokujikeleza", "ingxelo yovavanyo lwe-hydrostatic" kunye "nengxelo yokuhlolwa kwangaphambi kokunikezelwa" . Lilonke, sithatha lonke ikhonkco lolawulo lomgangatho olunzulu, siqinisekisa ukuba iyunithi nganye yokumpompa ukonwabela umgangatho olungileyo kunye nokusebenza okuthembekileyo.